Tantara - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Ny ivon'ny WKG > tantara
The Worldwide Church of God for short WKG, English Worldwide Church of God (hatramin'ny 3. Aprily 2009 Grace Communion International), dia niova toerana tato anatin'ny taona vitsivitsy momba ny finoana sy fanao efa ela. Ireo fiovana ireo dia nifototra tamin’ny fiheverana fa ny famonjena dia avy amin’ny fahasoavana, amin’ny alalan’ny finoana. Na dia efa nitory izany aza isika taloha, dia mifamatotra hatrany amin’ny hafatra fa ananan’Andriamanitra valisoa isika noho ny asantsika amin’ny toetra masina sy marina.
Nandritra ny am-polony taona maro isika dia nandinika ny fitandremana ny lalàna ho tsy fototry ny fahamarinana. Noho ny faniriantsika hampifaly azy, dia nanandrana nametraka fifandraisana amin'Andriamanitra aho tamin'ny alàlan'ny lalàna sy ny fitsipiky ny Testamenta Taloha. Tamin'ny fahasoavany dia nasehon'Andriamanitra antsika fa ny adidy amin'ny Testamenta Vaovao dia tsy mihatra amin'ny kristiana eo ambanin'ny fanekena vaovao.
Nataony ho lasa fananan'ny fahasoavany isika ary ho lasa fanavaozana amin'i Jesosy Kristy. Nanokatra ny fontsika sy ny tsapanay izy noho ny fifalian'ny famonjena azy. Miresaka amintsika vaovao ny soratra masina ary mankafy ny fifandraisana manokana ananantsika amin'ny Tompontsika sy Mpamonjy antsika isan'andro.
Mandritra izany fotoana izany, dia mahatsikaritra ny fanaintainan'ny enta-mavesatra isika taloha. Ny fahatakarantsika ny fotopampianarana diso dia nanala ny filazan'i Jesoa Kristy mazava ary nitarika fehin-kevitra diso sy fanao tsy araka ny Soratra Masina. Betsaka ny manenina ary tsy maintsy miala tsiny izahay.
Nanana fanahin'ny fahamarinana isika ary nahonon-tena - nanameloka ny kristiana hafa izahay tamin'ny niantsoana azy ireo hoe "Kristiana antsoina hoe", "nitaona" ary "fitaovana nataon'i Satana". Nanome fomba fiasa mifantoka amin'ny fiainana Kristianinay izahay. Nangataka fanarahan-dalàna amin'ny fanomezana mavesatra ny lalàn'ny Testamenta Taloha izahay. Nandray fomba ara-dalàna izahay tamin'ny fitarihana ny fiangonana.
Ny eritreritry ny Testamenta Taloha teo aloha dia nandrisika ny fiheveran-tena ho tsy mirehareha sy tsy mirehareha, fa tsy fotopampianaran'ny Testamenta Vaovao momba ny firaisankina sy firaisana.
Voafehintsika be loatra ny faminaniana mialoha sy ny tombantombana ara-paminaniana, ka ahena ny filazantsaran'ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ireo fampianarana sy fanao ireo dia loharanom-nenina lehibe. Fantatsika ny alahelo sy ny fijaliana vokatr'izany.
Diso, diso izahay. Tsy nisy nikasa hamitaka na iza na iza. Nifantoka tamin'ny zavatra ninoanay hatao ho an'Andriamanitra izahay, hany ka tsy fantatsika ny lalana ara-panahy nisy anay. Na natao izany na tsia, io lalana io dia tsy araka ny Baiboly.
Rehefa mitodika ny lasa isika dia manontany tena amin'ny tenantsika hoe ahoana no mety nahatonga izany fahadisoana izany. Ny fontsika dia tonga any amin'ireo izay voafitaky ny fampianaran'ny soratra masina. Tsy manamaivana ny fisavoritahana ara-panahy sy ny fisafotofotoany ara-panahy isika. Mitady mafy ny fahatakaranao sy ny famelan-kelokay izahay.
Takatsika fa ny halalin'ny fivadihana dia mety hanasarotra ny fampihavanana. Amin'ny haavon'ny olombelona dia matetika ny dingana fampihavanana sy sarotra no maharitra. Fa mivavaka ho azy isan'andro isika ary mahatsapa fa ny ministeran'ny fanasitranan'i Kristy dia afaka manidy na dia ny ratra lalina indrindra aza.
Tsy manandrana manarona ireo lesoka momba ny fotopampianarana sy ny Baiboly taloha izahay. Tsy tanjonay ny hanafina ny sakana fotsiny. Miatrika mivantana ny tantaranay sy miatrika ireo hadisoana sy fahotana hitantsika isika. Ho ampahany amin'ny tantarantsika foana izy ireo amin'ny fampahatsiahivana tsy tapaka ireo loza ateraky ny ara-dalàna.
Saingy tsy afaka miaina amin'ny lasa isika. Tokony hihoatra ny lasa isika. Tsy maintsy tohizantsika. Hoy izahay miaraka amin'ny apôstôly Paul: "Manadino izay ao aoriana aho ary manatratra izay ho avy ary manatratra ny tanjona napetraka, ilay loka amin'ny fiantsoan'Andriamanitra any an-danitra an'i Jesosy Kristy." - Fil. 3:13 -14).
Noho izany dia mijoro eo am-pototry ny hazo fijaliana isika - fambara farany amin'ny fampihavanana rehetra. Io no sehatra iraisan'ny mpifaninana mivory. Amin'ny maha kristiana antsika dia fantatsika rehetra ny fijaliana nitranga tao ary antenainay fa hiombona antsika izany famantarana izany.
Maniry mafy ny hihaona amin'ireo olona mety naratra tany izahay. Ny ràn'ny Zanak'ondry sy ny herin'ny Fanahy irery ihany no ahafahantsika mandalo ireo ratra sy manatanteraka ny tanjontsika iraisana.
Izany no fomba ilazako ny fialantsasatra feno fahatsorana sy amin'ny fo feno ho an'ny mpikambana rehetra, ny mpikambana taloha, mpiara-miasa ary olon-kafa - izay rehetra niharan'ny fahotantsika taloha sy fandikana diso ny Soratra Masina. Ary manasa anao hiaraka aminay izahay hitory ny tena filazan'i Jesoa Kristy manerana an'izao tontolo izao satria mitahy antsika amin'ny fitomboana sy tanjaka vaovao amin'ny asa fanompoana Andriamanitra ankehitriny.